I-4 Pre-Turkey Day restriction Exercise Peace Trust yenziwe | RayHaber | raillynews
IkhayaJIKELELE4 Kwenziwe isicelo sangaphambi kweTurkey Day Reiling Peace Trust application
Ukuvinjelwa kwansuku zonke kwangaphambi kokuzethemba kwe-turkey kwenziwa ukwenza ukuthula
Umqondisi Jikelele Wezokuphepha e-Içiii, Gendarmerie General Command kanye no-Coast Guard Command wezwe lonke ezweni laseTurkey Confidence Peace ngasikhathi sinye kwabanjwa amahora ngoMeyi 21 08.00.
Esebenzayo, ngaphambi kwemikhawulo yezinsuku ezi-4 zokuvalwa okufanele isetshenziswe phakathi kwe-Eid al-Fitr; Izinyathelo ezithathiwe ukulwa nohlobo olusha lwe-coronavirus (Covid-19) zahlolwa.
Ngesikhathi sokucwaningwa kwamabhuku, kwahlolwa ukuthi ngabe izindawo zokusebenzela ezivaliwe zahambisana ngokuphelele nalesi sinqumo, nokuthi ngabe izindawo zokusebenza, okuchithelwe amahora awo okusebenza ahlelwa kabusha, zasebenza ngesikhathi esibekiwe.
Ngesikhathi sokucwaningwa kwamabhuku, kwahlolwa ukuthi ngabe izakhamizi ezilinde ngaphakathi nangaphandle emgqeni ezindaweni zemisebenzi ezinjengezimakethe zasemgwaqweni, amabhikawozi, iziteshi zikaphethiloli zaphoqelelwa ukuthi zigqoke amabanga omphakathi nomaski, kanti izimakethe zilandela imithetho yokwamukelwa kwamakhasimende, nomuntu oyedwa nge-10m².
Ukuthi izakhamizi zethu ezingaphansi kweminyaka engama-20 nalabo abaneminyaka yobudala engama-65 nangaphezulu, abanesikhathi sokufika ekhaya, bayasilandela leso sinqumo bahlolwa.
Abasebenzi abangama-53 896 XNUMX babambe iqhaza kulesi sicelo
Abasebenzi abayizinkulungwane ezingama-8 392 nezinja zomtshina abangama-53 babambe iqhaza kulesi sicelo, esenziwa ngamaphuzu ayizinkulungwane ezingama-896 217. Kulesi senzo esenziwa ngasikhathi sinye ezweni lonke, kuhlonishwe abantu abangu-743 kubantu abaphenye imibuzo, abangu-31 baboshwa.
Izinqubo Zokwahlulela Nezokuphatha Zisetshenziswa kubantu abayizinkulungwane ezingama-3 abangaguqukeli ebangeni lomphakathi
Izinqubo zokuphatha nezobulungiswa zisetshenziselwe ingqikithi yabantu abayi-2, kufaka phakathi abangu-260 20 kusukela kwephulwa umthetho wokuqalwa kobuntu, abangu-1.384 65 abangaphansi kweminyaka engama-286, kuthi abangama-3 babe ngaphansi kweminyaka engama-930 nangaphezulu. Kuhlolwe izimoto eziyi-159 694 98, abanikazi bezimoto / abashayeli abayizinkulungwane ezingama-862 abanikezwe inhlawulo yokuphatha.
Kulesi senzo, izimoto ezingama-1.396 zavinjelwe ukuba sezimoto, kwatholakala izimoto ezi-5 ezebiwe, kwathi abashayeli abangama-43 bahoxiswa.
Kuhlolwe izingadi eziyi-10 254 zamapaki, izindawo eziyizi-4 938 103 zokuhamba phambili nezindawo zokusebenzela eziyi-785 XNUMX XNUMX.
Izinhlawulo zokuphatha nezobulungiswa zakhokhiswa ezindaweni zokusebenzela eziphelele eziyi-17, eziyi-18 zephula umthetho wokuvalwa okunganqamuki, eziyi-115 zasebenza ngaphandle kwamahora okusebenza acacisiwe kanye nomthetho wokubanga amabanga omphakathi ongagcini-ka-150.
Ngaphezu kwalokho, izibhamu ezi-5 ezingekho emthethweni, izibhamu ezingama-25 ezingekho emthethweni, izibhamu ezimbili ezingenalutho, izinhlamvu ezingama-2, amathuluzi okusika / ukubhoboza, amamagazini ayi-254 epistol nezingxenye ezahlukahlukene, ama-4 g cannabis, ama-5 g ama-heroin, ama-23 g bonzai, angama-4 g I-methamphetamine, amachaphaza angama-101, izidakamizwa zokwenziwa eziyi-23, amaphakethe kagwayi abalekayo angu-25 kanye namalitha angama-101 esiphuzo ababaleki / mbumbulu abanjwa.
Usuku 4 Ukuvinjelwa kwangaphambili kwe-'Turkey Peace Trust 'Kwenziwe
Kunokuphishekela Ramadan eTurkey Country ovamile owawuse Peace Trust
Kuzovulelwa kuphi kumkhawulo wezinsuku ezi-3 zokuvinjelwa ekhaya ..? Nayi imininingwane
I-Metro ne-Metrobus Expeditions e-Istanbul 4-Day Feature Reriction
Isicelo seKhadi leNsuku zonke saqala eSikhungo Sokuzijabulisa saseSarıkamış Cıbıltepe
I-Yildiray Kocarslan Isiqinisekiso Esiqinisekisiwe
Umhlangano wangaphambi kwesikhathi wonyaka waqhutshwa e-Erciyes Ski Centre
Ukuhamba ngezimoto ngokuthula ku-Lego tracks (Video)
I-Erciyeste Floating Will Safe
Iziphathimandla zinikeza ithemba ekuqalisweni kweSitimela seBaku-Tbilisi-Kars ku-2013
Usihlalo we-Association of Railways Lovers Demirel Uqinisekisiwe
I-CHPli Guven, i-Delican sika-IZBAN yaphendula
U-Atilla Demirtunç Uqinisekisile iNhloko yezokuThutha isikhulu-Sen Sen
Ngaphambi kokhetho kuvuliwe Çerkezköy izitimela zisusiwe ngenyanga ye-4
I-Turkey, Ukuvuselelwa Kwamandla Amandla ku-Daily Record Breaks
Ngaphambi kokuvulwa kukaNgqongqoshe waseMarmaray u-Yıldırım utshele ngoMarmaray
Amathuna Amangcwaba Amangcwaba Avuliwe Emgwaqweni Ngaphambi Kwemkhosi
Usihlalo we-YSK uGüven wavakashela uVeysi Kurt